Global Voices teny Malagasy » Brezila: Lasa mpamono olona mihitsy ny pôlisy breziliana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Desambra 2008 22:17 GMT 1	 · Mpanoratra Paula Góes Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Tanora, Zon'olombelona
Amin'ny fotoana ankalazan'ny manerantany ny Andron'ny Zon'olombelona indrindra no mihiaka manohitra ny fomba mamohehitra ataon'ny polisy niteraka fahafatesana  ny mpamaham-bolongana Brezialiana fa tsimatimanota ry zalahy any Rio de Janeiro.
Tamin'ny volana Jolay, dia maty novonoin'ny polisy miaramilan'ny fanjakana izay mihevitra fa fiara halatra vao nifanenjehana teo ny fiara nentin'ny renin'ilay zalahy vao telo taona maty ity. Nahazo tifitra 17 ilay fiaram-pianakaviana, telo tamin'ireo no nahatratra an'i João Roberto. Afaka madiodio tamin'ny latsabato efatra toherin'ny telo ny vesatra famonoan'olona tafahoatra ny iray amin'ny polisy William de Paula tamin'ny alakamisy teo. Voasazy hanao asa an-terivozona fito volana noho ny fandratrana madinika ilay renin'i João, Alessandra Amorim Soares sy ny rahalahiny Vinicius Amorim, sivy volana kosa izy.
Ny fanafahana madiodio araka ny lazain'ny mpitsara dia noho ny fiheverana fa nanatontosa tsara antsakany sy andavany ny asany ilay polisy, dia tsy nahatezitra ny fainakavian'ilay boay kely ihany fa ny ankamaroan'ny mpamaham-bolongana ihany koa izay mihevitra fa maivana loatra ny sazy, maneho ny fisian'ny tsimatimanota. Niaraka tamin'ny fianakaviana nitady ny rariny izy ireo.
Nilaza ny mpamaham-bolongana ao amin'ny My little corner of the world  [pt] fa nankaloiloy azy ny didim-pitsarana ary nomarihiny ihany koa ny filazany fa raha voambana basy manodidina ny fiarany dia nanipy kitapon-jaza iray avy eo amin'ny varavarankely izy hilzany fa misy zazakely ao anaty fiara:
Trangana Tsitimanota iray hafa indray, ka ain-jaza no manefa noho ny herisetran'ny lehibe, fiainana iray nitsahatra, fiainana a-nofy, TSY MINO ny tsy fananan'ilay polisy tsiny aho! Mino ny fahatsoran'ilay reny kosa aho izay nanao fihetsika manambara fa misy zaza ao anaty fiara, marina tokoa fa miaina ao anaty fiaraha-monina lian-dra isika, Mety ho ilay bandy nenjehiny ihany koa no tao anaty fiara, nefa na izany aza, raha ny jiolahy tokoa no tao, moa tsy hanameloka ny polisy ny fikambanana miaro ny zon'olombelona? Ary izao? Aiza ny zoKO? ny zavatra tsy misy dikany indrindra eto Brezila dia ilay antsoina hoe “zon'olombelona”, Fa iza moa no tena manana izany? izay mangalatra, mamono olona ary maneho habibiana amin'ny zazakely! izany no vokatry ny fijerin'ny fiaraha-monina, na dia manana nofinofy, zavatra tiana atao ary indrindra TSY FANANANTSINY aza izy dia nikapaiina ny fiainany ary tsy vitan'ny hoe tsiaro sy fanaintainana no navela tamin'ny ray aman-dreniny fa mbola tsy nahazo rariny ihany izy, ary efa niteny aho teo aloha teo fa raha ilay mpangalatra no maty, dia efa nigadra ilay boay [polisy] io, fa satria moa iray amintsika ihany ilay maty, dia tafiditra anaty antontan'isa fotsiny izy… sa tsy izay?
Fernanda Freitas  [pt] no mitena fa maharary [nymahita an'i] Willian de Paula afaka. “Ahoana no hiafarantsika?”, hoy izy nanontany:
Araka ny nolazain'ny gazety androany maraina dia nitondra T-shirts misy izao hafatra izao ny fianakavian'ny voampanga: “izay efa nihaona taminao ihany no mahalala ny mahaolombelona anao.” Raha heverina izay nolazain'ilay polisy nanambara fa nanafangaro ny fiara izy (teo ampanenjahana fiara miloko mainty ry zareo mialoha ny namonoany ilay zazakely) tao amin'ny arabe somary maizina ary dia nieritreritra aho fa mbola zavadoza kokoa no nitranga, ary dia vinavinaiko hoe kazarana olona manao ahaona moa i Willian de Paula : maditra. Indrindra, mety ho ratsy kokoa ny toe-draharaha. Aminn'y tifitra 17, dia efamety ho nahafaty ny fianakaviana iray manontolo izy. Fa zaza tsy manantsiny iray ihany no najedany, tena tsara fanahy anie izy e! ô re olona ô, tsy nodidiana fa hamono, hampitahotra, hampiditra anaty loza antsika olom-pirenena ny Polisy miaramilan'ny fanjakana. Natao hiaro antsika sy hiantoka ny filaminantsika izy ireny. Tsy tokony ho ratsy kokoa mihitsy, ry olombelona lehibe! Ny andraikitry ny polisy rehefa anaty fisalasalana dia ny tsy mitifitra: tokony hanodidina, hanatona ary hanamarina. Tsy kadradraka izahay, ary hanao ahoana ny hiafarantsika amin'ny ataon'ireto polisy tsy mahomby sy mifampiaro ireto? Ahoana no hiafarantsika amin'ny fanarotsaronana ataon'ny mpitsara? Milaza fa hampakatra fitsarana ambony ny mpisolovava saingy ity fanadiovana madiodio ity aloha dia ampy hanamarinana fa mbola hisy ny ain'olo-tsotra hidaboka eo anoloan'ny tsimatimanota.
Mpamaham-bolongana iray hafa antsoina hoe Fernanda, avy amin'ny Esse meu Palco  [pt], no nahamarika fahadisoana iray lehibe nataon'ny polisy nanafangaro ny antsoina hoe Fiat Palio  amin'ny Fiat Stilo :
Eh, misy fahasamhafana lehibe kosa eo amin'ny Palio sy ny Stilo e… sa tsy misy? “manatontosa ny andraikiny ry zareo.” Hatraiza izany izahay no hiaina anaty loza ao anatin'ny kendrin'ny polisy amin'ny basy manatontosa ny asany? (…) Tadidio fa didim-pitsaram-bahoaka izy ity, izay midika fa olona tsy mahalala ny lanjany , ny halehibeny ary ny hasarobidin'ny fanapahan-kevitra raisiny no nandidy. Fa inona ny nitranga nahatonga azy ho afaka madiodio? Fa inona no eritreretiny?
Renato Vargens  [pt] no nilaza fa miatrika ny fotoana iray mangidy indrindra nandritra izay 40 taona farafahakeliny ny mponin'i Rio de Janeiro, Mihevitra fa efa fitsipika mahazatra ny famonoana olona ny heloka bevava – ary ny tsimatimanota – . Izany no mahatonga ireo mpitsara ireo nanafaka ilay polisy:
Ny fahatsapako dia tsy raharahian'na iza na iza ho an'ny firaha-monin'i Rio de Janeiro ny fahafatesan'i João Roberto. Indrisy moa ho an'ireo mpitsara efatra nanafaka azy fa nanao ny adidiny ilay polisy.
Maurício Baccarin  [pt] koa mba lasan'eritreritra tamin'izay tao an-dohan'ireo mpitsara ireo tamin'ilay fanaahan-keviny ary dia tonga tamina tsoakevitra hafa:
Satria, araka ny mpisolovava Paul Rangel dia , “tsy azon-dry zareo akory ny fomba fifidianana. Efa nanontany ny mpitsara ny iray amin'izy ireo hamerina ny fanontaniana ary eritretiko fa mbola tsy azony hatrany ilay izy, menatra izy amin'ilay hoe izy irery ihany no tsy mahazo resaka. Izay no izy, raha izy irery tokoa no tsy mahazo”. Nitsikera ny fomba fitsarana i Rangel ary heveriny ho nihoa-pefy ny mpitsara satria nandraiki-natory nandritra ny fotoam-pitsarana. “Olona tsy manana ny etika ireo”, hoy ny mpisolovava.
Mahatsiaro i Reinaldo Cintra  [pt] fa tsy sambany akory no tsimatimanota eo ampanonoana olona tsy manantsiny thaka izao ny polisy tamin'ity taona ity, ary melohiny ny firaisana tsikombakomba noho izany. Ary amin'ny fotoana fankalazana tahaka izao:
Amin'izao fanambarana ny Zon'olombelona izao, dia toy ny namelaka tehamaina hoan'izay mino fa tsy voafetran'ny faniriana tsara tsy akory ireo zo ireo tamin'nydidim-pitsrana nasehony.
Na Boca Mole  [pt] bolongana no nampiseho lahatsarina mpivady iray very zanakalahy tamina toe-javatra sahala amin'izao indrindra, ary nisy sehatra hita ihany koa nandritra ny fotoam-pifitirana azon'ny CCTV. Manontany izy:
Rahoviana ihany lahy vao hitsahatra hatreo ny tsy fizàrana andraikitra ataon'ireto polisy tsy voaomana ho eny ankalamanjana ireto?
Paulino  [pt] koa mitovy fisainana tahaka izany:
Tsy tokony ho fanamarinana ny famonoana olona tsy manantsiny manerana ny tananan'i Brezila ny didim-pitsarana tahaka itony, Saingy manome vahana kosa ny tsy fahombiazan'ny mpitandro ny filaminana, miainga amin'ny fampidirana olona tsy mifanaraka amin'ny asa ataony, ka hatramin'ny fanaovana fanamiana nefa manataka eran'ny lalana, ary mamita hatramin'ny farany ny fahadisoana efa natao hatrany ampanombohana. Mahazo rariny izany noho ny tsy fijoroantsika amin'ny mahaolompirenena, ao amin'ny politika sy ny demaokrasia.
Fa amin'ny mpamaham-bolongana falyamin'ny didim-pitsarana kosa dia misy ireo polisy to an'i Aderivaldo Martins Cardoso  [pt], izay miteny fa nanjaka ny rariny eto Brezila:
TSY MAINTSY TOHERINTSIKA NY HERISETRAN'NY POLISY ETO AMIN'NY FIRENENTSIKA, saingy tokony hahatsapa ihany koa isika fa misy fahadisoana mpitranga ihany amin'ny asa. Maro ny ohatra ahitana fa segondra vitsy fotsiny dia afaka manova ny lalampiainana iray manontolo. Tsy vitsy ny fotoana ahitana ny fahadisoan'asa tahaka ny an'ny dokotera na ny an'ny polisy, no manova ny ho avin'ilay olona, mamaram-piainana na mandrava ny nofy. Samy mamonjy ain'olona na ny dokotera na ny polisy isan'andro,koa raha misy ny fahadisoana izay mpitranga dia mety ho lasa koa ny ainy. ARY TSY LAVORARY AKORY ISIKA, FA MANAO FAHADISOANA MATETIKA KOA.
Mônica  [pt], polisy hafa indray, milaza fa manaporofo ny fisian'Andriamanitra ny didim-pitsarana tahaka izao. Tsikerainy ny manampahefana ao amin'ny polisy izay manameloka tranga tahaka izao avy amin'ny teniny ihany:
“-Tsy nanao araka ny torolalan'ny asa ilay polisy, izay manambara fa tsy tokony hitifitra mihitsy ny polisy raha tsy efa fiarovana ny ainy.” Eto dia samy miala andraikitra amin'ny tsy fahampiana fanazarantena nefa andoavana karama ny manampahefana ambony.
Ary i Eduardo Ritter  [pt] kosa dia mampitaha ny toe-draharaha mpitranga any Brezila, ahitana ny polisyzatra ny mitifitra aloha vao manontany avy eo, amin'izay nitranga tany Gresy, izay nahitana tranga tahaka izao ka nahatoonga ny firenena manontolo hanohitra . Niteny ary izy fa ny olana fototry ny polisy dia ny karamany ambany loatraj, ka nitarhany ny olona hanontany hoe raha mahazo “ R$ 600 [tokotokony ho US$ 250] ianao hamelomana fianakaviana, iza amin'ireo polisy ireo ary no tsy mandray kolikoly?”:
Ankehitriny,dia mivadika [amin'ny eto] ny mitranga any. Mandoa hetra ny olona any, tsara karama ny polisy, ary raha mahafaty sivily ny polisy, tsy ilay polisy voampanga ihany no toheriny, fa ny sampana-draharaha iray manontolo mihitsy, izay tsara orina saingy nandamoka! NIsy revolisiona tany noho ny vono olona iray nataona polisy. Manara-dalàna ny polisy any. Fa eto kosa, mifanala azy amin'ny dihin'ny parakeet  ny polisy, saiky ny ankamaroan'ny vaovao lehibe rehetra no mandefa ny fanoherana any Gresy nefa thaka ny miteny hoe: “Ary izany voina sy gidragidra rehetra izany dia nisy noho ny famonoana polisy iray sivily iray? Fratratra loatra.”
Ny herisetra ataon'ny polisy any Brezila no iray amin'ny fantatra malaza indrindra fa fandikana ny zon'olombelona any. Araka ny tatitra tsy afisialin'ny fikambanana mpiaro ny Zon'olombelona (Human Rights Watch) dia tokony ho 3000 isantaona eo ho eo no maty vokatry ny herisetra ataon'ny polisy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/12/13/940/
 mamohehitra ataon'ny polisy niteraka fahafatesana: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Brazil#Summary_executions_and_police_violence
 tranga tahaka izao ka nahatoonga ny firenena manontolo hanohitra: https://globalvoicesonline.org/2008/12/10/greece-riots-in-athens-continue/
 dihin'ny parakeet: http://www.youtube.com/watch?v=U-hmgHZE6Lo